यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ
विचार सरला गौतम
अबका मानिसमा नेतृत्व र नीतिलाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिएको छ। यही दृष्टिकोणले दृश्य फेरेको छ। यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ।
२०७६ सालको उपनिर्वाचनमा ४२२ भोट ल्याएपछि उनको जमानत जफत भयो। हार नमान्ने हर्कलाई जमानत जफतले हल्लाउन सकेन।
बालेनलाई भोट किन दिएको? बालेनलाई गीत गाउने केटो, चश्मा लाउने केटाकै रूपमा हेरिरहे। उनले कोरोनाकालमा गरेका कामहरूको नजर अन्दाज गरिरहे। फोहोर व्यवस्थापनदेखि सम्पदा संरक्षणमा उनका योजना र विचार सुन्नै चाहेनन्। सुने पनि नसुने जस्तो गरिरहे।
कसले खोस्दै छ मान्छे रोज्ने हाम्रो अधिकार? भरतपुरकै एक मतदाता महिला 'आफ्नै मान्छे काटेको पार्टीलाई कसरी भोट' हाल्ने भन्दै छिन्। कांग्रेस र माओवादी मिलेको उनलाई मन परेकै छैन। मन नपराउन नपाउने? नागरिकको मतअधिकारसँग दलतन्त्रले गरेको नमीठो ठट्ठा हो गठबन्धन।
कालापत्थरमा ‘तमासा’ पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दामा दाताको सहयोग जता देखिन्छ त्यतै ढल्किने मौसमी अभियन्ताको जगजगी बढ्दा वास्तविक अभियन्ताहरूको योगदान छोपिएको छ।